Mampiasa Dredge Ellicott® ny famokarana herinaratra mba hamokarana fitaovana ilaina amin'ny fampiasana mahasoa
"Fitaovana tena lafo vidy indrindra naterina teto amin'ity trano ity. ”- Mark Shea, Mpanolotsaina mpanampy amin'ny fitsaboana maloto
Nandritra ny hira tsy fahita amin'ny fantsom-borona hidradrika, a Ellicott Brand Series 370 Dragon ”DRAGON® " cutterhead dredge nangalatra fitaovana efatra samihafa avy amin'ny loharano famokarana jiro roa: vovoka, lavenona ambany, lavenona, ary ny sokay afangaro amin'ny lavenona. Nivezivezy mihoatra ny 100,000 metatra cubes ny dredge tao anatin'ny telo volana monja.
Ny tanànan'i Springfield, Illinois dia manana sy miasa ny City Water Light & Power (CWLP) Dahlmann Generating Station. Ny saribao mirehitra dia miteraka vokatra fako telo: lavenona, lavenona ambany ary sokay avy amin'ilay orinasa fanadiovana rano. Taloha, ireto akora fako ireto dia voatahiry maharitra any anaty dobo amin'ny toerana maina na lena. Vao haingana izay no nahitana fampiasana mahasoa ho an'ireo
vokatra. Ny lavenona ambany dia ampiasaina amin'ny famoronana haino aman-jery fifangaroana sy ny fikosoham-bary; lavenona manidina dia ampiasaina ho fitaovana famenoana ny fananganana arabe; kapoaka no ampiasaina amin'ny faritanin'i Illinois mba hanalefaka ny asidra ary hanatsara ny vokatry ny vokatra.
Misy olana lehibe iray anefa: ny vokatra rehetra ireo dia natsipy tany anaty dobo nanorim-ponenana, ary noho izany dia mirona hipetraka amin'ny faritra midadasika ao anaty dobo izy ireo, ka mahatonga azy ireo tena sarotra ny mahazo azy ireo. Taloha ny tanàna dia nihady ireo fitaovana ireo tamin'ny alàlan'ny lamosina miorina amin'ny sisin'ny farihy, fa io fitaovana io dia voafetra ihany ny tratra ka ny ankamaroan'ny fitaovana - hatramin'ny
90% - nijanona tao anaty dobo anaty rano.
Ny CWLP, taorian'ny famotopotorana momba ny haitao maro momba ny fitrandrahana, dia nisafidy ny hitrandraka ilay fitaovana tamin'ny alalàn'ny fanapahana cutterhead an'ny marika Ellicott Brand "DRAGON®". Nanapa-kevitra ny hanadoka ny dobo honenanany lehibe indrindra izy ireo (tokotokony ho 3000 metatra ny halavany x 1000 metatra ny sakany) izay misy lavenona roa sy lavenona manidina. Ny tanàna dia nanofa ny Ellicott®, «dredge» marika ary miasa izany miaraka aminy
mpiasa manokana izay efa nampiofanin'ireo injenieran'ny serivisy Ellicott® "an-toerana" tsy misy vidiny fanampiny ho an'ny tanàna.
Miaraka amin'ny dredge dia azon'ny CWLP fitrandrahana rano ao ambanin'ny rano mankany amin'ny tongotra 2000 lavitry ny sehatra fampandehanana izay nesorina ny fantsom-bary avy tao anaty dobo ho an'ny fametrahana sy ny famaohana. Satria ny fantsom-panafody 12 santimetatra dia mamoaka solika 50% ao anaty faritra miakatra mankany amin'ny 4000 GPM, ary tsy fantatry ny tanàna raha hipetraka ao amin'ny faritra fampandehanana na miverina miverina amin'ny dobo lehibe ny fitaovana, a ny fanapahan-kevitra hanombohana voalohany dia sarotra. Na izany aza, taorian'ny roa herinandro nandotoana dia nanapa-kevitra ny tanàna fa ny lavenona ambany sy ny lavenona lava no mivoaka tsara ao amin'ny faritra misy ny fampandehanana ary mety ho voaroaka mora foana izy ireo, izay mety ho miasa amin'ny faritra iray monja. Famirenana lehibe teo amin'ny programa fanodinana hatrizay satria ny 100% ny akora ao anaty dobo dia azo nosorohina miaraka amin'ny dredge ary maina noho ny fampiasana mahasoa.
Ny fahombiazan'ny Dredge dia mitahiry mihoatra ny $ 200,000
Satria ny ampahany amin'ny lavenona dia nifindra nankany amin'ny rafitry ny lakan-drano lehibe, dia nampiasaina ihany koa ny dredge mba hanadio ity faritra ity mba hahafahan'ireo mandamina tsara kokoa mandamina ao anaty dobo ary avy eo dia misy lalan-drano madio kokoa. Andriamatoa Mark Shea, mpitantana ny tetikasa dredging ho an'ny Tanàna, dia tsy nanana afa-tsy ny nidera ny trondro marika Ellicott®. "Tsy vitan'ny fanovozana drakitra ny fanodinana ihany fa ny fahazoana lakan-drano madio kokoa noho ny vidiny ambanin'ny fitrandrahana mahazatra mampiasa backhoes sy dozers. Nandritra io fotoana fohy nitrandrahana io, ny tanàna dia nitahiry $ 285,000 vs. teknika mahazatra, tahiry 50%. ”
Nandany $ 1.80 isaky ny tokotany vatosoa fotsiny ny tanànan'ny tanàna raha oharina amin'ny fanontanian'ny mpifanila farany ambany indrindra amin'ny $ 3.85 isaky ny tokontany.
Ny dobo faharoa sy kely kokoa, izay mahazo rano manondraka avy amin'ilay dobo lavenona / lavenona lehibe, dia misy slurried-in koa avy amin'ny fizotran'ny fanadiovan-dry zareo SO2. Tsy fantatry ny Tanàna ny fomba hanatanterahana ilay dredge Ellicott® Brand 370 ao anaty sokay matevina sy matevina tafangona ao anaty dobo. Nisy fantson-drano 2000 metatra koa tafiditra amin'izany, ka nametraka metatra mikoriana (handrefesana ny slurry gpm) sy fandrefesana ny hakitroka nokleary handrefesana ny isan-jaton'ny solida ao anaty lemaka. Tamin'ny fivoahan'ny 2000 metatra miala, ny fikorianana dia 4100 gpm, ary ny tsy fetezan'ny sokay ao anaty fantsom-batana dia 50% matanjaka amin'ny lanjany. Na dia afaka mitrandraka hatramin'ny 370 metatra aza ny 20, dia natao hatrany amin'ny 15 metatra ny halalin'ny lava-bato. Hitan'ny Tanàna ihany koa fa ilay sokay dia
mifangaro miaraka amin'ny lavenona manidina, ary ny Series 370 dia nanamboatra ity fitaovana ity tamin'ny 50% solosaina amin'ny lanjany.
Noho ny fahaizan'ny dredge manetsika ny sokay amin'ny atiny manana solika avo dia azo atao ny manatitra ny sokay ao anaty endrika ranon-javatra ary mametraka azy mivantana amin'ny zaridainan'ny toeram-pambolena. Efa fanao any antan-tany andrefana izao, ary mitombo ny fizotrany.
Mark Shea dia naneho hevitra hoe: "Noporofoinay fa ny dredge an'ny Ellicott® Series 370 dia afaka mamindra ny telo amin'ireo vokatray tena lafo vidy, ary manana tsenan'ireto vokatra ireto izahay. Saika tsy nisy ny fihenan'ny dredge na dia niasa tamin'ny ririnina mangatsiaka kokoa aza izahay. Izy io angamba no fitaovana lafo vidy indrindra eto amin'ity trano ity. ”
Ny lavenona manidina, lavenona ambany ary lava-boasary, izay saika tsy ho vita sitrana intsony, ary ny fanaovana azy rehetra miaraka amina paikady tokana monja dia fianjerana lehibe ho an'ny City of Springfield, Illinois. Tsy vitan'ny hoe nanao tahiry vidin'ny 50% raha oharina amin'ireo teknika mahazatra, fa amin'ny toe-javatra maro izay tsy hiasa mihitsy ny teknika mahazatra.
Atombohy amin'ny Ellicott ny tetik'asa fanamoriana ala